လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: April 2012
Photography ပညာရပ်ဆိုင်ရာ/ Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ/ iOS Devices ဆိုင်ရာ/ Myanmar Fonts နှင့် Keyboards/ Tips & Tricks..
Windows OS ဆိုင်ရာ
Window Driver ဆိုင်ရာ
Ubuntu OS ဆိုင်ရာ
iOS Devices ဆိုင်ရာ
Mac OS ဆိုင်ရာ
Linux OS ဆိုင်ရာ
Windows Phone ဆိုင်ရာ
အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဖတ်စာများ
Epilepsy Vs Mood Disorders အတက်ရောဂါ နဲ့ စိတ်မူပြောင်းရောဂါ
Wednesday, April 11, 2012 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
ကျမ (့) က အသက် ၂၇ နှစ်၊ အိမ်ထောင် မရှိပါ။ လောလောဆယ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေပါတယ်။ စစဖြစ်တာ ၂ဝဝ၁ တုန်းကမှပါ။ အဲတုန်းက စာတွေ အရမ်းကျက် စိတ်ဖိစီးလွန်း ပြီးတော့ ဆောင်းတွင်းညမှာ စာကျက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားပြီး နိုးလာတော့ တက်တာလား လေငန်းလား ဘာလားတော့ မသိဘူး ပါးတွေရွဲ့ မျက်ဖြူလန်ပြီး စကားပြောလို့ မရဘူး။ သူများပြောနေ လူပ်နိုးနေတာတော့ သိတယ်။ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ဘူး။
Friday, April 06, 2012 သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ Dallas/Fort Worth မှာ အိမ်ခြေ ၁,၁၀၀ ခန့် မုန်တိုင်းတိုက် ခတ်သွားတဲ့ ပုံတွေပါ... ခန့်မှန်းခြေ မုန်တိုင်းအရေအတွက် ၁၃ ခုခန့်ရှိပြီး တနာရီကို မိုင်(၁၅၀)နှုန်း ပမာဏနဲ့ တိုက်ခတ်သွား တာပါ... လက်သီးဆုပ်ပမာဏခန့်ရှိတဲ့ မိုးသီးတွေလည်း ကြွေကျခဲ့ပါတယ်... ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးနဲ့ လူအသေအပျောက်နှုန်းကတော့ အတိအကျမသိပါဘူး...။
Friday, April 06, 2012 ထွေရာလေးပါး
Thursday, April 05, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Thursday, April 05, 2012 ထွေရာလေးပါး
အံ့ဖွယ် Photoshop လက်ရာ....
Thursday, April 05, 2012 အနုပညာလက်ရာ
ထူးခြား ဆိုင်ကယ် Accident....
Wednesday, April 04, 2012 မတော်တဆမှု
ကြံကြံဖန်ဖန် တရုတ်နိုင်ငံက Virgin Boy Eggs.......
Wednesday, April 04, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Virgin Boy Eggs ဆိုတာကတော့ ကြက်ဥကို ကျင်ငယ်ရည်နဲ့ ပြုတ်ထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ Dongyang မြို့က ရှေးရိုးရာ သရေစာတစ်မျိုးလို့ ဆိုပါတယ်... ကြက်ဥကို အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ယောက်ျားကလေးတွေရဲ့ ကျင်ငယ်ရည်နဲ့ စိမ်ထားပြီး... အဲဒီကျင်ငယ်ရည်နဲ့ပဲ ပြန်ပြီးပြုတ်ထားတာပါ... တနေ့လုံးနီးပါး ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကြက်ဥတွေဟာ ကွဲအက်လာပါတယ်... အဲဒါဆိုရင်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှေးခေတ်ပုလိပ်များ (၁၈၉၀-၁၉၃၀)....
Wednesday, April 04, 2012 ဓါတ်ပုံ
Tuesday, April 03, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ | ထွေရာလေးပါး
အန္တရာယ်ကနေ ရင်သွေးငယ်ကို ကာကွယ်ပေးနေသော မိခင်ဆင်မကြီး...
Tuesday, April 03, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ | ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ထူးဆန်းထွေလာ, ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ,
Tuesday, April 03, 2012 ထွေရာလေးပါး
ထိုင်းနိုင်ငံက ရေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ....
Tuesday, April 03, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Monday, April 02, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
အလုပ်ထဲကအရှုပ်တွေ...ပြဿနာတွေနဲ့...စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အနောက်မှာခနချန်ထားခဲ့ပြီး... သဘာဝအလှတွေကို ဇိမ်ကျကျ ရှုမြင်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံက Soneva Kiri Resort ကို သွားလိုက်ရုံပါပဲ... အဲဒီ Resort က စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ အပြင်အဆင်လေးက အတော်လေးကို ဆန်းကြယ်ပြီး ကဗျာဆန်လှပါတယ်... စားပွဲခုံတွေကို အမြင့် ၅ မီတာရှိ သစ်ပင်ကြားတွေထဲမှာ
Monday, April 02, 2012 ထွေရာလေးပါး
Sunday, April 01, 2012 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာ မိမိရဲ့ကင်မရာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကိုင်တွယ် အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုသလို... အချိန်ကာလနဲ့ နေရာရှုခင်းအနေအထားလည်း ရွေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်... အဲ့ဒီအပြင် ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံ တဲ့သူရဲ့ ကိုယ်နေကိုယ်ဟန်ကလည်း အလွန်အရေးကြီးတယ်လို ကြားဖူးနားဝ ရှိကြမှာပါ...အောက်က အခြေခံ Poses လေးတွေကတော့ သင့်ကို အခြေခံဓါတ်ပုံသမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်
တင်ခဲ့ပြီးသော Posts များ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်...
► 2014 (8609)
► April (1852)
Epilepsy Vs Mood Disorders အတက်ရောဂါ နဲ့ စိတ်မူပြေ...
အန္တရာယ်ကနေ ရင်သွေးငယ်ကို ကာကွယ်ပေးနေသော မိခင်ဆင်မြ...
သိလိုသော အကြောင်းအရာကို အောက်က Search Box ထဲမှာ မြန်မာ/အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရိုက်ထည့်၍ ရှာဖွေပါ...
နောက်ဆုံး တင်ထားသော ပို့စ်များ..
RANDOM POSTS BY LABELS..
Zawgyi KitKat2014 and Zawgyi one 2014 for android
Windows 8/ 8.1 မှာ Zawgyi Font ပေါ်အောင် လုပ်ချင်ရင်...
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ (၉ ပွဲ)
Emergency pills အရေးပေါ်တားဆေး အမေး (+18)
Programming Languages E-books စာအုပ်များ...
Ei Chaw Po (အိချောပို)..
Abortion Pills ဖျက်ဆေးတွေအကြောင်း
HUAWEI G610 no power နှင့် vibrate တုန်ခြင်း
Huawei G6-U00 SIM ONE Repair
Myanmar New Face Model Nay Inzara - 8 Days Cover Photos
Android Apps & Games (372) Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ (434) Anti-virus & Security (100) E-Book များ (82) Internet Download Manager (26) iOS Devices ဆိုင်ရာ (188) Linux OS ဆိုင်ရာ (17) Mac OS ဆိုင်ရာ (29) Multimedia (136) Myanmar Fonts & Keyboards (64) PC Games (12) Photography ပညာရပ်ဆိုင်ရာ (134) Scholarship (ပညာသင်ဆု) (165) Tips & Tricks (264) Ubuntu OS ဆိုင်ရာ (15) Window Driver ဆိုင်ရာ (16) Window Phone ဆိုင်ရာ (11) Windows OS ဆိုင်ရာ (149) ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ (2623) စက်မှုရေးရာ (139) စားသောက်ဖွယ်ရာ (238) ထူးဆန်းထွေလာ (975) ဓါတ်ပုံ (353) နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ (1071) ပညာရေး (458) ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ (2046) မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြုပြင်နည်းဆိုင်ရာ (24) မတော်တဆမှု (118) မှုခင်းသတင်း (134) ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ (190) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် (80) သိပ္ပံနှင့် အာကာသဆိုင်ရာ (23) အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဖတ်စာများ (111) အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ (314) အားကစား (77) အထွေထွေသတင်းများ (308) အနုပညာလက်ရာ (295) ထွေရာလေးပါး (282) ဖျော်ဖြေရေး၊ Celebrity (625) ဗေဒင်နှင့် ယတြာ (74)
Blog ကို Android ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက်ပါ. File Size ကတော့ 252.32 KB ပါ...
ပို့စ်တွေကို Email ကနေတဆင့် လိုချင်ရင် အီးမေးလ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ
Delivered by ကိုမျိုး
နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့လာရန် နေရာများ.. Tikkitoo (China Tablet Firmware) Tabletrepublic (China Tablet Firmware) Mobile Cellphone Repairing Repair Mobiles Allgsmtips (Mobiles Repairing and Others) Mobile Repair Helps MobyWare (Download Anything) 1MOBILE (Applications) Android Firmwares Download Stock ROMs for Android Needrom (All Mobile Rom) Oppo Mobile Firmwares Sony Xperia Firmware Huawei Firmware Download Rom/Firmware Download MAD MODDER (Huawei Firmware) Johnnyparanoia (Huawei Firmware) Mymodem (Huawei Calculator) Firmware & Rooting Free Xperia Project Custom ROM Distribution Romzhijia (All Mobile ROM) Xperia Firmware2 Tsar3000 (Android Firmwares) Xperia Flash Tool Mobile Hard Reset The OSKit Project Singularity RDK Debian OS Fedora PTCRB Opensuse (Linux OS) Appbodega (Mac OS) The FreeBSD Project Freedos HTC Related Site PersianHTC (HTC ROMs) Hasoon2000 (HTC ဆိုင်ရာ) Galaxy S5 ဆိုင်ရာ Goo.im (GApps) Phone/SIM Unlock iPhoneHacks (iOS Devices) ADB Toolkit Get iOS Jailbreak-me (iOS devices) Firmware Download (iOS devices) Pkhacker (Games & Software) Driverguide (Drivers) Tricksman (All Mobile Tips & Tricks) Freeware for Android Hexamob (Rooting) xda (Developers Forum) Appsgeyser (Create APK) Andromo (Create APK) Appyet (Create APK) Free App Maker (Create APK) Android3apps (Create APK) Web2apk (Create APK) Pkgames (Games & Software) Androidpit (Android) Portable Software Cracks & Keygens Android Tips & News Mobile Software Repair Hacking Tutorial Myanmar Hack Forum Myanmar Security Forum Hack Worm (Hacking) Hackingloops (Hacking) Backtrack-pages (Hacking) Hacker Ground Best Hacking Tools The Red Hatter (Hacking) Hackers-hackingblog (Hacking) Hackthissite (Hacking) Evil Zone (Hacking Forum) Hacking With Basit (Hacking) Blink Hacker Group (Hacking) Hackinthebok (Hacking) WikiHow (Hacking) h4hacky (Hacking) Learn Hacking (Hacking) AccessCode7 (Hacking) Hackeracademy (Hacking) Breakthesecurity (Hacking) EC-Council (Hacking) MD5Decrypter 1001tricks Mamusoft (Games & Software) Smashingtricks (Tips & Tricks) MajorGeeks (Softwares) Snap Files (Softwares) Tucows Downloads Android Freeware (Android) Android Kit (Development) Android Rom Update Aus Photography Cybi Crew (Softwares) Deviant ART (Design) Droidow (Android) Exploit-db (Hacking) Smart Phones Tips & Tricks Unlock Code (Samsung) Reset Code (All Mobile) GSMNEW(Mobile) True Android Bestmacsoftware (Mac OS) Soft32 (Softwares) Smartphones (Solution) iOS Firmware Download Kickass (All) Felix Bruns (iDevices) Onekeyrom (Huawei) Onekeyrom (HTC) Onekeyrom (Samsung) Onekeyrom(Moto) Onekeyrom (ZTE) Onekeyrom (LG) Onekeyrom (Sony) Onekeyrom (Lenovo) Onekeyrom (Coolpad) Onekeyrom (Apanda) Onekeyrom (Xiaomi) Onekeyrom (Hisense) Zdnet (Softwares) Freewarefiles (Softwares) Fully Software (Android & Win) Helplogger (BlogTips) IAPPHACKS (iDevices) iDownloadBlog (iDevices) ipswDownloader (iDevices) Kingo Root (Rooting) UNLOCKROOT (Rooting) King Root (Rooting) Baidu Root (Rooting) Root Genius (Rooting) OneClickRoot (Rooting) SRSRoot (Rooting) MacRumors (Mac, iDevices) Microsoft Word Template Mobile Firmware (All) MPx team (Android) Myanmar Lens Man Php Myanmar (Web design) Designnmoo (Web Design) Dribble (Web Design) Designfloat (Web Design) Designbump (Web Design) Designrelated (Web Design) Udacity (Learn Coding) Khanacademy (Learn Coding) Coursera (Learn Coding) Teamtreehouse (Learn Coding) RECOVERY DISCS (Windows) Sam Firmware (Adroid) Samsung Firmware Updates Samsung Updates Mobango (Mobile Software) Zedge (Mobile Software) Droidviews (Mobile) Blog Tutorials Pro Blogger Tricks Blog Tips & Design Tutorials The iPhone Wiki (iDevices) The Pirate Bay (All) Window Phones OS Windows Mobilerdx (Mobile Solution) Witesomtesla (Mobile Solution) Daily Blogger Templates 24work (Blog Tutorial) TechTricks (Blog) Blogknowhow (Blog) Allblogtools (Blog Tips) My Blogger Tricks Blogger Tips & Tricks Spice Up Your Blog New Blogger Tips Helper for Blogger Sora (Blogger Templates) Blog Templates Blog Templates Deluxe (Blogger Templates) ZMT (Software) Recovery Tool Box GSM Hosting (Mobile Forum) MMAS (Mobile) Ebook-space (IT E-books) Find Serial Number Team-Rept AT4RE Android Games Approb (Apps & Games download) Androidfreeware (Apps & Games download) Androidgamesroom (Games APK download) Appsapk (Andorid APK download)
HTML Editor & CSS Generator
HUAWEI Firmware/Update Collection
Sony Xperia Device Firmware များ
All Nokia Full version Firmware များ
Android အတွက် USB Driver များ
Copyright@2011-လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း - Blog Designed by ကိုမျိုး